विकास यसरी सम्भव छ ?::Pathivara News
चन्द्र भण्डारी काठमाडौं, १८ फागुन राष्ट्र निर्माणका क्रममा हामीले जहिल्यै विभिन्न समस्या झेल्यौँ । एकअर्काविरुद्ध अनेकौँ आरोप–प्रत्यारोप लगाउने काम पनि हामीले निकै गर्‍यौँ । हामीले विगतबाट अमूल्य अनुभव त प्राप्त गर्‍यौँ, तर विगतका कमी–कमजोरीलाई सच्याएर अघि बढ्ने क्रममा चाहिँ जहिल्यै चुक्यौँ । परिणामतः यति सुन्दर, यति मनमोहक वातावरण भएको, यति धेरै स्रोत र साधन भएको, यति ठूलो गौरवपूर्ण इतिहास भएको देश आर्थिक समृद्धिको दिशामा चाहिँ खासै अघि बढ्न सकेन । पुर्खाले हाम्रो देशलाई अखण्ड राखे, हामीलाई जहिल्यै स्वतन्त्र राखिरहे, स्वाभिमानपूर्वक आत्मनिर्णय गर्नसक्ने तुल्याइदिए ।
तर, हाम्रा क्षुद्र स्वार्थ र दूरदृष्टिको अभावका कारण हामीले हाम्रो देशलाई राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक वा प्राविधिक दृष्टिकोणले सार्वभौम मुलुक बनाउन सकेनौँ । हामीले जनतासामु जतिसुकै ठूला, चिल्ला र गुलिया भाषण गरे पनि, जनतालाई मिठा कुरा सुनाएर ढाँटे पनि, हामी पद र व्यक्तिगत प्रतिष्ठाभन्दा माथि कहिल्यै उठ्न सकेनौँ । यसै क्रममा यस पंक्तिकारले केहीअघि यसै दैनिकमार्फत ‘नेपाल विकासका समस्या’बारे विभिन्न अवधारणा प्रस्तुत गर्दै समाधानका उपाय आगामी लेखमा प्रस्तुत गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । यस सानो आलेखमा तिनै समस्या समाधानका उपायबारे संक्षेपमा चर्चा गरिनेछ ।
हामीले गर्ने हरेक निर्णयले राष्ट्रको समृद्धिमा कहीँ न कहीँ असर पारिरहेकै हुन्छ । धर्म, संस्कृति, शिक्षा, विकास वा समृद्धि, वैदेशिक सम्बन्धजस्ता विषयमा हामीले गरेका कुनै पनि निर्णयले नेपाल र नेपाली जनतालाई फाइदा हुनुभन्दा घाटा हुने काम मात्र भएका छन् । तसर्थ, यिनै विषयमा यहाँ केही चर्चा गर्नु सान्दर्भिक नै हुनेछ । कुनै पनि देशका लागि उसको आफ्नो सनातन धर्म, संस्कृतिको अत्यन्त ठूलो महत्व हुन्छ । त्यही धर्म र संस्कृतिले नै सम्बन्धित देशको विकास र समृद्धिलाई अघि बढाउन सक्छ ।
तर, आज हामीसित न हाम्रो धर्म छ, न संस्कृति नै छ । न हाम्रो भाषा छ, न हाम्रो वेशभूषा नै छ । हाम्रो अहिलेको संविधान, जनताका लागि ल्याइएको लोकतन्त्र र जनताको अधिकारका लागि ल्याइएको संघीयतामा हाम्रो भाषा, वेशभूषा, धर्म र संस्कृतिलाई निषेध गर्ने खालका विषय आए । आफ्नो सनातन धर्म, संस्कृतिलाई आधार बनाएर गरिएका विकास र समृद्धि मात्र दिगो र दीर्घकालीन हुँदो रहेछ । संसारभरका उदाहरण हेर्दा पनि यो पुष्टि हुन्छ । युरोप, एसिया वा अमेरिकामा जहाँजहाँ विकास र समृद्धि सम्भव भएको छ, त्यहाँ त्यहाँ उनीहरूले आफ्नो धर्म र संस्कृतिलाई सँगसँगै लिएर गएका छन् । यस्तो विकास र समृद्धि नै जनताप्रति उत्तरदायी हुँदो रहेछ । कुनै गलत काम गरेको खण्डमा ईश्वरबाट दण्डित हुने, पुनर्जन्ममा पाप लाग्ने जस्ता सोचकै भरमा पनि धेरै राम्रा काम भइरहेका हुन्छन् ।
त्यसैले देशको न्याय प्रणालीदेखि कुनै पनि क्षेत्रको विकास, निर्माण र समृद्धिमा धर्म, संस्कृतिको महत्वपूर्ण स्थान हुन्छ । हामीकहाँ पनि यहाँको सतातन धर्म, संस्कृतिले हिमाल, पहाड र तराईबीच हार्दिकतापूर्ण सम्बन्ध बढाएको थियो । हाम्रो धर्मले नै छिमेकी भारत र नेपालबीचको सम्बन्धमा हार्दिकता थपेको थियो । आज हामीले आफ्नो धर्मलाई छोडिदिँदा हाम्रो आन्तरिक तथा बाह्य सम्बन्धमा समेत विखण्डन आइरहेको छ । जसका कारण देशै विखण्डित हुने त होइन भन्ने आशंकासमेत बढ्न थालेको छ ।
यसैको परिणामस्वरूप नेपाल–भारत सम्बन्धमा गम्भीर असमझदारी देखियो । त्यसैले, अब धर्म, संस्कृतिको विषयमा हामी कहाँ कहाँ कसरी चुक्यौँ, यसको विश्लेषण गरेर हाम्रो धर्म र संस्कृतिलाई विकास र समृद्धिसँग जोडेर अघि बढाउन सकेको खण्डमा नेपालको विकास असम्भव छैन ।
त्यसैगरी देश विकासका लागि हामीले हाम्रो शिक्षालाई पनि धर्म, संस्कृतिसित जोड्नुपर्छ । धर्म, संस्कृति, भाषा र वेशभूषासित जोडिएको शिक्षाबाट मात्र देश विकास सम्भव छ । हामीले हाम्रो देशको वातावरण, मानवीय सम्बन्धअनुसारको शिक्षाले मात्र देशको आवश्यकताअनुरूपका जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्छ । हाम्रो पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकमा सुधार गरी नैतिक मूल्य र मान्यतामा आधारित शिक्षाको विकास गर्नु आजको महत्वपूर्ण आवश्यकता हो ।
हामीले आफ्नो धर्म, संस्कृति, र नैतिकतालाई चटक्कै भुलेर छाडा, नक्कली र अरूको आवश्यकताअनुसार तयार गरिएका पाठ्यक्रमलाई जबर्जस्ती घोकाइरहेका छौँ । हामीले समयानुकूल उपयोगी पाठ्यक्रम निर्माण गर्नसमेत सकेनौँ । हामीले हाम्रो शिक्षामा एउटा पर्खाल खडा गरिदियौँ । जन्मँदै कसैलाई तँ गरिब भएकाले सरकारी स्कुलमा पढ्नुपर्छ र ऊचाहिँ धनी भएकाले निजी स्कुलमा पढ्नुपर्छ भनेर दुई तहको शिक्षा दियौँ । यसरी हामीले शिक्षा प्रणालीबाट नागरिक–नागरिकबीच विभेद सुरु गरिदियौँ । हाम्रो यस्तो शिक्षानीतिकै कारण धनीका छोराछोरी युरोप, अमेरिका जाने र गरिबका छोराछोरी अरब र भारततिर पुग्ने परिस्थिति निर्माण भइरहेको छ ।
हामीले देशमा उत्पादित जनशक्तिलाई स्वदेशको सेवामा रमाउने शैक्षिक प्रणाली र परिस्थिति निर्माण गर्न सकेका छैनौँ । अनि कसरी सम्भव हुन्छ देशको विकास र समृद्धि ? त्यसैले अब हामीले सर्वप्रथम हरेक बालबालिका र युवालाई समान शिक्षा दिने शैक्षिक प्रणाली निर्माण गर्नुपर्छ । अब बन्ने हाम्रा पाठ्यक्रमले व्यावहारिक सीपमूलक शिक्षामा जोड दिनुपर्छ । त्यसैगरी माथिल्लो तहमा चाहिँ अनुसन्धानमूलक शैक्षिक प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । यस्तो शैक्षिक प्रणालीबाट उत्पादित जनशक्तिबाट बेरोजगारी समस्यामा पनि कमी आउँछ र बाहिरी प्रतिस्पर्धामा पनि हाम्रा शिक्षित जनशक्ति खरो उत्रिन सक्छन् ।
हाम्रो धर्म, संस्कृति र पूर्वीय दर्शनलाई आजको प्रविधिसित जोडेर नवीन शैक्षिक प्रणाली निर्माण गर्न सकेमा देशको विकास समृद्धिसित हाम्रो शिक्षा र त्यसबाट उत्पादित जनशक्ति जोडिन आउँछ । आज विकसित पश्चिमी समाजसमेत पूर्वीय दर्शनलाई अपनाउने बाटोमा हिँडिरहेका छन् भने हामीले त यसलाई छाडेर होइन, विज्ञान र प्रविधिसित यसलाई जोडेर अघि बढ्न सक्नुपर्छ । तब मात्र सम्भव छ, विकास र समृद्धि ।
जबसम्म संस्थागत रूपमा भइरहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैन र भ्रष्टाचारीहरू कारबाहीमा पर्दैनन्, तबसम्म देश विकासको सपना देख्नु नै बेकार हो । जस्तोसुकै राजनीतिक प्रणाली अपनाए पनि जबसम्म भ्रष्टाचारको जरो उखेल्न सकिन्न, तबसम्म देश विकासको कल्पना साकार हुन सक्दैन ।
हामीले विगतमा पनि विकास नगरेका होइनौँ । हामीले गाउँगाउँसम्म सडक पुर्‍यायौँ । पुलपुलेसा निर्माण गर्‍यौँ । गाउँगाउँमा बिजुली पुर्‍यायौँ । सहरदेखि गाउँसम्म सबैतिर खानेपानीको सुविधा पनि पुर्‍यायौँ । दूरदराजका ग्रामीण बस्तीसम्म हामीले स्वास्थ्यचौकीहरू पनि पुर्‍याएकै छौँ । तर, हामीले रोपेको बिउबिजनअनुसारको फल फल्यो कि फलेन भनेर चाहिँ हामीले कहिल्यै खोजी गरेनौँ । हाम्रो विकास लक्षित वर्ग र समुदायसम्म पुग्न सक्यो कि सकेन भनेर हामीले चासो दिएनौँ । हामीले गरेको विकास दिगो हुन सक्छ कि सक्दैन, यसले दीर्घकालसम्मको आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने पक्षमा पनि ध्यान दिन सकेनौँ ।
यथार्थमा हामीले देशको विकासका लागि धेरै गर्‍यौँ । तर, यस्तो विकास आजको समय र हाम्रो भौगोलिक संरचनाअनुसार हुन सकेन । हामीले हजारौँ किलोमिटर सडक त खन्यौँ, तर तिनै सडक मान्छे मार्ने धराप बने । हामीले विकास निर्माणका लागि दीर्घकालीन सोच राखेर योजना बनाउनै सकेनौँ । हामीले हजारौँ किलोमिटर बांगाटिंगा सडक खन्नुको साटो पहिल्यै सुरुङ मार्गको विकल्पमा काम गर्न सकेको भए त्यसको प्रतिफल राम्रो हुने थियो । हामीले हाम्रा पहाडी भूभागमा सुरुङ मार्गको विकास गर्न सकेको भए यसबाट एकीकृत बस्ती निर्माणमा पनि सघाउ पुग्न सक्थ्यो ।
यस्तो अवस्थामा पहाडका अनकन्टार भिरपाखा र टाकुरामा जनताहरू बस्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन । यसबाट आजको नेपाल सुन्दर र व्यवस्थित सहरैसहरको देश बन्न सक्ने थियो । हाम्रो देशका विकास विज्ञहरू केवल भाषण गर्न माहिर छन् । उनीहरूले ल्याएको विकास निर्माणको योजनाले उनीहरूलाई त सम्पन्न बनायो, तर देश र जनता भने जहाँको त्यहीँ रहिरहे । उनीहरूको विकासले गरिब जनतालाई छुनै सकेन । हामीले विकासका नाममा पहाडहरू फुटायौँ । जसले गर्दा पहाडको माटो, ढुंगा र बालुवाका कारण हाम्रा नदीनाला र तराईका बस्ती तहसनहस भइरहेका छन् । हामीले जे गर्‍यौँ, त्यसबाट सीमित व्यक्ति त धनी बने, तर देश र जनता भने जहाँको त्यहीँ रहे । त्यसैले अब देशको माटो र हावापानीअनुरूप जनताको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर योजनाबद्ध विकासपथमा लम्किन ढिलो भइसकेको छ ।
प्रकृतिले जलस्रोतको अपार भण्डार दिए पनि हामीले त्यसको सदुपयोगसम्म गर्न सकेनौँ । हामीले देशलाई आवश्यक पर्ने बिजुलीसमेत निकाल्न सकेका छैनौँ । जलस्रोतको धनी देशमा छिमेकबाट बिजुली आयात गर्नुपरिरहेको छ । जनता अझै पनि लोडसेडिङको मारमा छन् । देशमा नदीनाला जति पनि छन् । तैपनि, छेउकै ठुल्ठूला टारहरू सिँचाइ अभावमा सुक्खा छन् । हामीले नदीहरूबाट बाँध बाँधेर बिजुली निकाल्ने, जनतालाई सिँचाइ सुविधा दिने जस्ता काममा विकासलाई डोर्‍याउनै सकेनौँ । अबको हाम्रो विकास हाम्रा नदीनालाको समुचित उपयोगमा मात्रै केन्द्रित हुन सक्यो भने पनि यो देशको मुहार फेरिन समय लाग्दैन ।
हाम्रो जस्तो आर्थिक रूपमा निकै कमजोर देशमा भ्रष्टाचारले सीमा नाघिसकेको छ । अहिले तल्लो तहका सामान्य क्लबका पदाधिकारीदेखि देशका प्रधानमन्त्रीसम्म कोही पनि भ्रष्टाचारबाट अछुतो छैनन् । तल्लो तहका कर्मचारीदेखि माथिल्लो तहका अधिकृतसम्म, निजामती, सेना, प्रहरीदेखि संवैधानिक निकायसम्म सबै कुनै न कुनै रूपमा भ्रष्टाचारको आहालमा चुर्लुम्म डुबेका छन् । देश बनाउनुपर्ने यस्ता जिम्मेवार व्यक्ति र संस्था नै आफू मात्र बन्ने, आफ्ना परिवार र आसेपासेलाई मात्र बनाउने खेलमा लागे । हरेक जिम्मेवार तहमा पुग्ने व्यक्ति पुस्तौँपुस्तालाई पुग्ने सम्पत्ति जोरजाममा लाग्यो । जसले गर्दा देश नराम्ररी पछाडि पर्‍यो ।
जबसम्म संस्थागत रूपमा भइरहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैन, भ्रष्टाचारीहरू कारबाहीमा पर्दैनन्, तबसम्म देश विकासको सपना देख्नु नै बेकार हो । हाम्रा जिम्मेवार अधिकारी, ऐन, कानुन, संवैधानिक निकाय र राजनीतिक नेतृत्व भ्रष्टाचारमा डुबिसकेको हुनाले यहाँ सीमित व्यक्ति धनी बन्दै गएका छन् भने जनताचाहिँ झन्झन् गरिब हुँदै गएका छन् । तसर्थ, देशको न्यायप्रणाली, संवैधानिक निकाय, राजनीतिक नेतृत्व, निजामती प्रशासन, प्रहरी, सेना जस्ता हरेक संस्थाभित्र पारदर्शिता ल्याउनुपर्छ । यसका लागि कुनै पनि निकायको नेतृत्वमा पुग्ने व्यक्तिको सम्पत्ति पारदर्शी बनाएर जनताको सहज पहुँचमा पुर्‍याउनुपर्छ । हामीले जस्तोसुकै राजनीतिक प्रणाली अपनाए पनि जबसम्म भ्रष्टाचारको जरो उखेल्न सकिन्न, तबसम्म देश विकासको कल्पना साकार हुन सक्दैन ।
हामी अहिले संघीय शासन प्रणालीमा गएका छौँ । जनताको घरदैलोमा सेवा पुर्‍याउने उद्देश्यबाट अँगालिएको यस्तो शासन प्रणालीका राम्रा र नराम्रा दुवै पक्ष छन् । तर, हाम्रो जस्तो गरिब देशमा हामीले जुन संरचना बनाएका छौँ, त्यो निकै खर्चिलो छ । हामीले यति सानो देशमा सात–सातवटा प्रदेश बनाएर गल्ती गरिसकेका छौँ । किनकि, यति धेरै प्रादेशिक संरचना धान्ने स्रोत–साधन हामीसित छैन । संघीय संरचनासहित प्रादेशिक संरचनाको प्रशासनिक खर्च यति धेरै बढिरहेको समयमा हामीसित त्यसलाई धान्न सक्ने वैकल्पिक साधन–स्रोत बलियो नभएको हुनाले हामीलाई यिनै संरचना बोझ बन्ने खतरा छ । यिनै संरचनाका कारण हाम्रो संघीय प्रणाली असफल बन्न बेर छैन । त्यसैले, बिस्तारै यस्ता संरचनालाई घटाउँदै लानु आवश्यक छ ।
शुक्रबार, फाल्गुन १८, २०७४ मा प्रकाशित